नर बहादुर दाहाल , (दार्जिलिंग )
तिमी नहुँदामा<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
हाल मेरो ?
हुँदैन हाल केही
बेहाल हुन्छ मेरो ।
समय धेरै गइसक्यो ।
यो झरी ।
अब म के भनुँ ?
सँधैं मलाई सम्झनू ।
कति बोलाउँदा पनि
कोही आएनन् ।
हृदयमा अटाएनन् ।
स्वर मिलाएनन् ।
व्यग्रतासित बित्दैछ दिन
अझ पनि भन्छु
फर्क प्रिये !
कहिल्यै ओभाएनन् ।
shyam kumar majhi
i like your kabita,when i read  its touch my heart.its likeareal event .